ဗလီ တွေမှာ ဓား ။တုတ် တွေ ထားလို့ လည်း ဘယ် ဘုန်းကြီးကျောင်း။ဘယ် ဗုဒ္ဓဘာသာတဦး တယောက်မှ သတ်ဖြတ် မီးရှိုဲံ့ တာ မခံ ရဘူးဗျ – ကိုယ့် ဟာကိုယ် ကာကွယ်ဖို့ ။ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« R2P : U.N လူ့ အခွင့်ရေးကောင်စီဟာ လူ့ အခွင့်ရေးနဲ့ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု ကိစ္စ(Genocide) တွေမှာ လုံခြုံရေး ကောင်စီ ကိုတောင် သောက်ဂရုစိုက်စရာ မလိုပဲ ကျော်လုပ်နိုင်တဲ့အာဏာ ရရှိထားပါတယ်။
ဘယ် ဘုန်းဘုန်းကမျှ ဟောတာမဟုတ်ဘူး Dr စိုင်းခမ်းလိတ် ဟောတဲ့တရား »
ဗလီ တွေမှာ ဓား ။တုတ် တွေ ထားလို့ လည်း ဘယ် ဘုန်းကြီးကျောင်း။ဘယ် ဗုဒ္ဓဘာသာတဦး တယောက်မှ သတ်ဖြတ် မီးရှိုဲံ့ တာ မခံ ရဘူးဗျ – ကိုယ့် ဟာကိုယ် ကာကွယ်ဖို့ ။
Even IF (I repeat IF ) we kept for self defense it is notacrime when 99% of the Buddhists (Bamas and Rakhines) are supporting 969 Buddhist TERRORISTS led by MI Monks keep on inciting HATRED on Muslims and attacking Masjids and Muslim properties. Gov authorities, Police and Military most of the time FAILED to protect effectively. Go to HELL BUDDHIST TERRORISTS!
Solonight Emparor with Venus Flytrap and2others
မန္တလေး က မသင်္ကာ တဲ့ ဗလီ တွေကို ဝင်စစ်ဆေး မယ် ဆိုတော့ မီးရှိုံ့ လူသတ် မုဒိမ်းကျင့် လုယက် တဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ ရဲ့ ခိုအောင်းနေထိုင်ရာ ကျောင်းတွေ ကျတော့ ဝင်မစစ် ဘူးလား ဗမာ အစိုးရ ရဲ့ ။
ဘုန်းကြီးကျောင်း တွေဟာ သာသနာ့နေရာ နဲ့ မတူတော့ ပဲ တပါးသာသနာ ကို ဖျက်ဆီး ရေး ဆွေးနွေး ရာနေရာ။ ဓာတ်ဆီ တုတ် ဓား လက်နက်များ စုဆောင်းထားရာ နေရာ။ on line ပေါ်မှာ လှုံ့ ဆော်ဝါဒဖြန့်သူ သင်္ကန်းခြုံ သံဃာ လိမ်များ အတွက် ခိုအောင်း ရာ နေရာ တွေ ဖြစ် ဖြစ်လာနေတာကို မသိချင် ယောင်ဆောင်နေ လို့ခင်ဗျား တို့လွတ်သွားရော လား ဗျ။ ဝင်စစ် လေ။ လှုံ့ ဆော်ရေး စာရွက် စာတန်း တွေက အစ ။ အဲဒီ စာရွက်တွေ ရိုက် ပြီး မိတ္တူ ပါဆွဲတဲ့ computer , မိတ္တူ ကူးစက် တွေပါ တွေ့ လိမ့်မယ်။
ခင်ဗျားတို့ဗမာ အစိုးရ မသိချင်ယောင်ဆာင်နေလို့တမင်သက်သက်ဖော် ရတာပါ ဗျာ။ ဘယ်မှာလဲ ။သက်သေပြ ပါလို့ တော့ တက်မလာ ခဲ့နဲ့ နော်။ သက်သေအထောက်ကထား နဲ့ သတင်းပေး ရင်တောင် ခင်ဗျားတို့အချင်းချင်း သတင်းကြို ပေးပြီး သိမ်းထားခိုင်း လိုက်တော့ ဘယ်သူ က ဘာပြော နိုင်တော့မှာ လဲဗျ။ ဟုတ်လား။
ဗလီ တွေမှာ ဓား ။တုတ် တွေ ထားလို့ လည်း ဘယ် ဘုန်းကြီးကျောင်း။ဘယ် ဗုဒ္ဓဘာသာတဦး တယောက်မှ သတ်ဖြတ် မီးရှိုဲံ့ တာ မခံ ရဘူးဗျ။ကိုယ့် ဟာကိုယ် ကာကွယ်ဖို့ ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ။ဗုဒ္ဓဘာသာ တွေဆီမှာ ရှိနေတာ က မွတ်ဆလင် ကို သတ်ဖြတ်မီးရှိုံ့ ဖို့ ဗျ။ ကွာ တယ်။ ရေးကြီး ခွင်ကျယ်တွေ လာလုပ်ပြ မနေနဲ့ ဗမာ ဓားပြ အစိုးရ။
This entry was posted on November 24, 2013 at 7:32 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.